प्लस टु पछिकाे गन्तव्य-२१
दिनेश गौतम काठमाडौं, १६ भदौ
कक्षा १२ पछि के पढ्ने ? कुन विषय पढेकाले के पढ्न पाउँछन् ? पढेपछि के बन्ने ? के कस्ता अवसर छन् ? विषय कसरी छनोट गर्ने ? नेपालमा के कस्ता विषयको पढाइ हुन्छ ? विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कुन विषय उपयुक्त हुन्छ ? यी र यस्तै प्रश्नलाई समेटेर कक्षा १२ उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीलाई विषयको महत्त्व, सम्भावना, छनोट आदिका विषयमा सहयोग गर्न शिलापत्रले ‘प्लस टु पछिको गन्तव्य’ स्तम्भ सुरु गरेको हो । विद्यार्थी र अभिभावकलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको यो स्तम्भ फलदायी हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौं । जसअन्तर्गत आज हामीले ब्याचलर अफ बिज्नेस म्यानेजमेन्ट (BBM) बारे सामग्री तयार पारेका छौं ।
के हो बीबीएम ?
ब्याचलर अफ बिजनेस म्यानेजमेन्ट बीबीएमले सफल उद्यमी बन्न सिकाउँछ । यो कोर्सले बैंक, फाइनान्स र वित्तीय संस्था सञ्चालनका लागि चाहिने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्दै आएको छ ।
त्यस्तै, बीबीएममा व्यापार र व्यवसायबारे अनुसन्धानसमेत गराइन्छ । यो कोर्सले नोेकरी होइन, आफैं मालिक बन्न प्रेरित गर्छ । बीबीएस, बीबीए र बीबीएम म्यानेजमेन्टकै कोर्स हुन् ।
बीबीएले व्यवस्थापन, बीबीएसले प्रशासनिक काम र बीबीएमले उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिएका छन् । त्यस्तै, बीबीएसको पढाइ वार्षिक प्रणालीमा हुन्छ भने बीबीए र बीबीएमको सेमेस्टर प्रणालीमा हुन्छ । बीबीएम उत्तीर्ण गरेपछि म्यानेजमेन्टको जुनसुकै विषयमा स्नातकोत्तर र विधावारिधि (पीएचडी) गर्न सकिन्छ ।
बीबीएम स्नातक तहको चार वर्षे कोर्स हो । यसमा ८ वटा सेमेस्टर हुन्छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर विभिन्न क्याम्पसले यो कोर्स सञ्चालन गरेका छन् । एक सेमेस्टरमा ४४ जनाले मात्र पढ्न पाउँछन् ।
११ र १२ मा विज्ञान र म्यानेजमेन्ट पढेकाले
जीपीए १.८ वा ४५ प्रतिशत ल्याएकाले
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले लिने इन्ट्रान्स परीक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्छ
चार वर्षे बीबीएम कोर्स पढ्न ४–५ लाख खर्च लाग्छ । तर, क्याम्पसले दिने सेवा सुविधाका आधारमा केही तलमाथि हुन्छ ।
विश्वविद्यालयले १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ । एक सेमेस्टरमा कम्तीमा चार जनाले निःशुल्क पढ्न पाउँछन् । यसका लागि एसईई र प्लस टु सरकारी विद्यालयमा पढेको हुनुपर्छ ।
क्याम्पसले त्यस्ता विद्यार्थीलाई मात्र छात्रवृत्तिमा पढाउने गरेको छ । क्याम्पसले छात्रवृत्तिका लागि परीक्षा लिन्छ । त्यस्तै, क्याम्पसहरूले सेमेस्टरमा उत्कृष्ट अंक ल्याउने विद्यार्थीलाई अर्को सेमेस्टरमा निःशुल्क पढाउने पनि गरेका छन् ।
अन्तिम सेमेस्टरमा इन्टर्नसिप वा प्रोजेक्ट वर्कमध्ये एउटा गर्नुपर्ने हुन्छ । इन्टर्न गर्ने रुचि भएकाले बैंक, फाइनान्स र उद्योगमा गएर ८ हप्ता काम गर्नुपर्छ । प्रोजेक्ट वर्क गर्ने इच्छा भएकाले कुनै विषय छनोट गरेर प्रोजेक्ट वर्क बनाउन सकिन्छ ।
(बीबीएममा साइकोलोजीसमेत पढाइन्छ । आममानिसको साइकोलोजी कस्तो छ, उनीहरू के चाहन्छन्, त्यो बुझेर व्यापार व्यवसाय गर्न सहयोग पुर्याउन साइकोलोजी विषयसमेत समावेश गरिएको हो ।)
बीबीएमको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको स्वउद्यमी बन्न सिकाउनु हो । यो कोर्सले अरूको काम गर्ने भन्दा आफंै केही गर्न प्रेरित गर्ने भएकाले अवसर धेरै छ । यो कोर्सले राम्रो ‘आइडिया’ दिने भएकाले आफ्नो क्षमताअनुसारको उद्यम गर्न सकिन्छ ।
थोरै लगानीमा पनि राम्रो व्यवसाय गर्न सकिन्छ । आफ्नो लगानीअनुसारको कुन क्षेत्रमा कस्तो उद्यम गर्ने भनेर अनुसन्धान गरेर काम गर्न सकिन्छ । बैंक, फाइनान्स वा सरकारी क्षेत्रमा काम नै गर्छु भन्नेका लागि पनि प्रशस्त अवसर छन् ।
लोकसेवा परीक्षामार्फत सरकारी कार्यालय
बैंक (सरकारी र निजी)
आफैं केही गर्छु भन्ने सोच भएकाको यो कोर्स पढ्दा निकै फलदायी हुन्छ । व्यापार व्यवसाय गर्दा कहिले नाफा कहिले घाटा हुन्छ त्यसैले जस्तोसुकै परिस्थितिलाई सामना गर्ने क्षमता भएकाले यो कोर्स पढ्न उपयुक्त हुन्छ ।
भारतमा बीबीएम कोर्स निकै चर्चित छ । भारत गएर पनि आफ्नै खर्चमा बीबीएम पढ्न सकिन्छ । त्यस्तै, स्नातकोत्तर गर्न र कामका लागि विदेश जान सकिन्छ ।
विद्यार्थीसँग जागिर र उद्यम गरी दुई वटा विकल्प छन् । व्यापार व्यवसाय गर्नेले आफ्नो लगानीअनुसारको आम्दानी गर्न सक्छ । जागिर गर्नेले सुरुवातमा मासिक कम्तीमा २० देखि ३० हजारसम्म कमाउन सक्छन् । पछि आफ्नो अनुभव र क्षमताका आधारमा तलब बढ्दै जान्छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत
बनहर्ट कलेज, बाफल, काठमाडौं
एसियन स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड टेम्नोलोजी, गोगंबु, काठमाडौं
अर्किड इन्टरनेसनले कलेज, गौशला, काठामाडौं
नागर्जुना कलेज अफ आइटी, पुल्चोक, ललितपुर
प्राइम कलेज, नयाँबजार, काठमाडौं
नेपाल मेगा कलेज, बबहरमहल, काठमाडौं
न्यु समिट कलेज, शान्तिनगर, काठमाडौं
लुम्बिनी एकेडेमिक कलेज, चावहिल, काठमाडौं
क्यापिटल कलेज अफ रिसर्च सेन्टर, कोटेश्वर, काठमाडौं
ट्रिनिटी इन्टरनेसनल कलेज, डिल्लीबजार, काठमाडौं
जेभियर इन्टरनेसलन कलेज, कालोपुल, काठमाडौं
निकोल्सन कलेज,सल्लाघारी, भक्तपुर
नेपाल कमर्स क्याम्पस, मीनभवन, काठमाडौं
डिएभी कलेज, जाउलाखेल, ललितपुर
त्रिभुवन मल्टिपल क्याम्पस, पाल्पा
नेसफिल्ड इन्टरनेसनल कलेज, लगनखेल, ललितपुर
लिङकन कलेज, गोगंबु, काठमाडौं
युनाइटेड कलेज, कुमारीपाटी ललितपुर
थेम्स कलेज, पुरानोबानेश्वर, काठमाडौं
पिपुल्स कलेज, पक्नाजोल, काठमाडौं
युनिभर्सल कलेज, शान्तिनगर, काठमाडौं
नेसनल कलेज, बनस्थली, काठामाडौं
जनमैत्री मल्टिपल क्याम्पस, कुलेश्वर, काठमाडौं
शंकरदेव क्याम्पस, पुतलीसडक, काठामाडौं
एम्बिसन कलेल, बनेश्वर, काठमाडौं
नेसनल इन्टिग्रेटेड कलेज, डिल्लीबजार, काठमाडौं
एभरेष्ट कलेज, थापाथाली, काठमाडौं
सरस्वती मल्टिपल क्याम्पस, ठमेल, काठमाडौं
सगरमाथा कलेज फर हायर स्टडिज्, डिल्लीबजार, काठामाडौं
मदनभण्डारी मेमोरियल कलेज, नयाँ बानेश्वर, काठामाडौं
एभरेष्ट इन्टरनेसनल कलेज, सोल्टीमोड, काठमाडौं
नेसनल कलेज अफ कम्प्युटर स्टडिज्, पक्नाजोल, काठमाडौं
नेपलया कलेज, कलंकी, काठमाडौं
कैलाली मल्टिपल क्याम्पस, कैलाली
भैरहवा मल्टिपल क्याम्पस, रुपन्देही
जया मल्टिपल कलेज, जोरपाटी, काठमाडौं
मकवानपुर मल्टिपल क्याम्पस, मकवानपुर
सहदेव सिग्देलः क्याम्पस प्रमुख, बनहर्ट क्याम्पस
नेपालमा अहिले पनि नोकरी गर्ने प्रचलन व्याप्त छ । नोकरीबाट मानिस बाहिर निस्कन सकेका छैनन् । यहाँ सीमित उद्योग, कलकारखाना, बैंक र फाइनान्स छन् । केही कामदार ती क्षेत्रमा आबद्ध भए पनि धेरै बेरोजगार छन् । यसकारण, युवायुवती रोजगारीका लागि विदेश पलायन भएका छन् ।
उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन नगर्दा यस्ता समस्या देखिएका हुन् त्यसैले विदेश पलायन रोक्न र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न बीबीएम शिक्षा आवश्यक छ । नेपालमै उद्यमी कसरी बन्ने ? थोरै लगानीमा पनि व्यापार व्यवसाय कसरी गर्ने ? यस्ता विषयबारे बीबीएममा सिकाइन्छ त्यसैले यसको विशेष महत्त्व छ । बीबीएम कोर्स अध्ययनपश्चात् काम खोज्ने होइन, अरुलाई काम दिने शिक्षा हो ।
आफू मालिक बन्ने
सुस्मा महर्जनः बीबीएम कार्यक्रम संयोजक, प्राइम कलेज
आफू रातदिन घोटिएर मालिकलाई धनी बनाउने काम मात्र भएको छ । आफू कसरी मालिक बन्ने भनेर कहिले सोचिएन । यसकारण, नेपाली पछि परेका हुन् । अब अरूको काम होइन, आफ्नै काम गर्ने हो । थोरै लगानीबाट सुरु गरेर ठूलो व्यापारी बन्न सकिन्छ । उद्योगी बन्न सकिन्छ ।
नामी व्यवसायी बन्न सकिन्छ । नाम र दाम कमाउन सकिन्छ । तर, यसका लागि केही ज्ञानको जरुरत पर्छ । त्यो ज्ञान भनेको बीबीएम कोर्सबाट पाइन्छ । चार वर्षे यो कोर्स गरेपछि जुनसुकै क्षेत्रमा गएर काम गर्न सकिने भएकाले नेपालजस्तो देशमा बीबीएमको महत्त्व धेरै छ ।
अनिललाल अमात्यः प्रिन्सिपल, एसियन स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड टेम्नोलोजी
बीबीएम पढेपछि जुनसुकै क्षेत्रमा जान सकिन्छ । बैंक, फाइनान्स लगायतका क्षेत्रमा काम गर्न सकिन्छ । त्यो भन्दा पनि उद्यामशीलतालाई प्राथमिकता दिइएको कोर्स हो । विद्यार्थीले पढेपछि आफैं केही गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले डिजाइन गरिएको कोर्स हो । नेपाल जस्तो देशमा उद्यमी बन्न बीबीएम कोर्स उपयुक्त हो ।
नेपाल कमर्स क्याम्पस, सरस्वती क्याम्पस र शंकरदेवबाट केही विद्यार्थीले बीबीएम कोर्सको अध्ययन पूरा गरेका छन् । निजी क्याम्पसमा भने विद्यार्थी अध्ययनकै क्रममा छन् । उनीहरू निकै उत्साहित छन् ।
अधिकांशको सपना उद्यमी बन्ने छ । कतिपयको रोजाइ भने बैंक र फाइनान्समै काम गर्ने छ । बनहर्ट कलेजमा अध्ययनरत मञ्जुला महर्जनको सपना भने बैंकर बन्ने छ । उनी बीबीए पढ्न चाहन्थिन् त्यसैले उनी विभिन्न कलेज पुगिन् । उनले त्यहाँ बीबीएमबारे बुझ्ने अवसर पाइन् । यसपछि उनी बीबीएमप्रति आकर्षित भइन् ।
त्यस्तै, बब्ली यादव सिरहादेखि उद्यमी बन्ने सपना लिएर बीबीएम पढ्न काठमाडौं आएकी हुन् । ‘उद्यमी बन्ने सपना छ,’ उनले भनिन्, ‘उद्यमी बनेर अरूलाई काम दिने हो ।’
त्यस्तै स्विटी तुलाधार पनि उद्यमी बन्न चाहन्छिन् । ‘बीबीएम पढेर जुन क्षेत्रमा पनि जान सकिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘उद्यमी बन्न नसके बैंकमा काम गर्ने हो ।’
प्राइम कलेजमा बीबीएम अध्ययनरत श्रीमन्त श्रेष्ठको पनि ‘बैंक म्यानेजर’ बन्ने सपना छ । ‘बीबीएम नयाँ कोर्स हो, यसले धेरै कुरा सिकाउँछ,’ उनले भने ।
सरकारले उद्यम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्न ‘युवा स्वरोजगार कार्यक्रम’ सञ्चालन गरेको छ । त्यस्तै, कृषि मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, नगरपालिका र गाउँपालिकाले उद्यम गर्नेलाई अनुदान दिने गरेका छन् । बैंक र वित्तीय संस्थाले पनि उद्यमीका लागि लगानी गर्दै आएका छन् ।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्था खुल्ने क्रम पनि उत्तिकै छ । सरकारले स्थानीय तहमा अनिवार्य बैंक हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा बैंक खुलिरहेका छन् । ती क्षेत्रमा काम गर्न दक्ष जनशक्ति आवश्यक छ । ती दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि बीबीएम कोर्स भरपर्दो सहयोगी हुनेछ ।
प्लस टु पछिको गन्तव्यका थप सामग्री
बीएमटीः मिडियामा अवसर
प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ १६, २०७६, २२:३८:००